Indlela yasebusuku iza kwiXiaomi Mi 8, Mi 8 Explorer kunye neMi Mix 2S | I-Androidsis
Emva kwe iklasi yeklasi malunga nendlela iifowuni ekufuneka zithathe ngayo iifoto ngexesha lokukhanya okuphantsi nguGoogle kunye nayo Pixel 3Abanye abavelisi beefowuni, abanjengoXiaomi, banexhala lokusebenzisa le ndawo kwiifowuni zabo ezininzi, ngokutsho oko kuthethiweyo.
Kutshanje, kuye kwavela iinkcukacha zokuba lo msebenzi mtsha, oya kuthi Imowudi yasebusuku yeKhamera, ikhona kwiifayile zovavanyo zangaphakathi zefirmware Siyi8, Mi 8 Explorer y UMDIBE wam 2S ukusuka kwiXiaomi, ukuze kungekudala bonke abasebenzisi bezi zixhobo babe beyifumana ngohlaziyo lwesoftware.
Okwangoku, inqaku likhupha njengokuhlaziya kwabo baqhuba inguqulelo ye-beta evaliweyo ye-MIUI 10. Isikrini, esityhila apha ngezantsi, sikuvezile oku ingaphezulu kancinci kwe-300MB ngobukhulu. Iimpawu ezintsha kufuneka zifumaneke kubantu abaninzi kamva xa zivela kwi-beta evaliweyo.
Umphathi weXiaomi uLiei Jun uthembisile ukuba uphawu lwekhamera yeNode yeNode ye Mi 3 Mix, ifowuni esele iqhayisa, iya kufumaneka kwezinye iiflegi zophawu (uyifaka njani i-Mi Mix 3 ikhamera kwezi zixhobo xa zikhona). Ngaphantsi kweeveki ezimbini emva kokuphehlelelwa kwesi sixhobo siphezulu, iqela lophando kunye nophuhliso lweXiaomi sele sandise umsebenzi kwiifowuni ezine esele zikwi-beta evaliweyo.
Indlela yasebusuku okanye indlela yasebusuku yenza ukuba abasebenzisi bathathe imifanekiso ecacileyo nengxolo encinci kwiindawo ezinokukhanya okuphantsi. Ezinye izinto zekhamera kwiMi MIX 3 zibandakanya ukurekhodwa kokuhamba kancinci @ 960 fps kunye nokurekhodwa kwevidiyo kwe4K @ 60 fps. Akukho lizwi okwangoku ukuba ezi mpawu ziya kudluliselwa kwiifowuni ezindala okanye kule trio ikhankanywe ngasentla. Nokuba kunganjani na, siza kufumanisa kwiintsuku okanye kwiiveki ezimbalwa ezizayo.
Umendo opheleleyo kwinqaku: I-Androidsis » Izaziso » IXiaomi Mi 8, Mi 8 Explorer kunye neMi MIX 2S zifumana umsebenzi wekhamera 'Imowudi yasebusuku' kwi-beta evaliweyo
Uwafihla njani amabali akho e-Instagram kubantu abathile